2nd Anniversary of Myanmar Pyapon HWPL Peace Library ~ စက္တင္ဘာထာဝရ
2nd Anniversary of Myanmar Pyapon HWPL Peace Library
2nd Anniversary of Myanmar Pyapon HWPL Peace Library စာကြည့်တိုက်လေး တစ်ခုဖြစ်အောင် ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ မိမိ လုပ်ချင်တဲ့ နေရာဒေသများကို ဦးဆောင်ပေးကြတဲ့ ညီငယ် ညီမငယ်များနှင့် ကျောင်းဆရာ ကျောင်းဆရာများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၂နှစ်တာ အတွင်းမှာ စာကြည့်တိုက် အမှတ် ၁ .၂. ၃. အထိတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မကြာခင်တော့ စာကြည့်တိုက် အမှတ် ၄ကို အကောင်းထည့်ဖော် ဆောင်ရွက်နေကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ်ကြီးပြီးရင်... ဖျာပုံဘက် ပင်လယ်နား၊ အ.လ.က (ခွဲ) နောက်မီးအရှေ့ကျောင်း ဆိုတဲ့ကျေးရွာလေးက အလကခွဲကျောင်းလေးမှာ စာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခု တူတူတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ချင်သေးတယ်...